Ihowuliseyili GQ-208 Compound Antifreeze Agent mveliso kunye nabenzi | Gaoqiang
I-GQ-208 iqulathe icandelo lokunciphisa amanzi kunye nezinto ezahlukeneyo ezingaphiliyo, izithako zokubulala izityalo eziphilayo kunye necandelo lamandla kwangoko. Isetyenziswa ikakhulu ebusika ekwakhiweni kwazo zonke iintlobo zekhonkrithi eyakhiwe endaweni, ikhonkrithi yangaphambi kokufakwa. Umgangatho wemveliso kwiJC475 kunye neminye imigangatho
1.Ukunciphisa ngokufanelekileyo indawo yokubanda yamanzi asimahla kwikhonkrithi ukunqanda iqabaka.
2.Promote hydration zesamente phantsi kweemeko ubushushu asezantsi, ukuphucula amandla ekuqaleni eziphathekayo, ukwandisa amandla ukumelana iqabaka
3.Ineempawu zamandla kwangoko, ukuphucula, ukunciphisa amanzi kunye nokufakwa komoya. Ingasetyenziswa njengearhente yamandla kwangoko.
I-4.Improve Iipropathi ezibonakalayo nezomatshini zekhonkrithi, ukuphucula isalathiso sokuqina
1.Ukulungele ukwakhiwa kwebusika kuzo zonke iintlobo zekhonkrithi ezilahliweyo, ikhonkrithi yangaphambi kwexesha, zonke iintlobo zodaka, njl.
Ingasetyenziselwa ulwakhiwo lwasebusika lweendlela, izikhululo zeenqwelo moya, iibhlorho, amandla ombane, ukugcinwa kwamanzi, amazibuko kunye neeprojekthi zolwakhiwo zasekuhlaleni nezamashishini.
Ingadityaniswa kunye nearhente yokunciphisa amanzi ukulungiselela ikhonkrithi yeplastiki kunye nempompo yekhonkrithi
I-4.D3 isebenza kulwakhiwo phantsi kweemeko zemozulu ezinobushushu obuchaziweyo bungu -15 ℃ okanye ubushushu bendalo abukho ngaphantsi ko -20 ℃; I-D4 ilungele ukwakhiwa phantsi kweemeko zemozulu ezinobushushu obuchaziweyo ngo -10℃ okanye ubushushu bendalo abukho ngaphantsi kwe -15 ℃
Ubungakanani: umgubo 2.0 ~ 3.0%; Umbane wawuyi-2.0 ~ 3.0% (ibalwa lilonke ixabiso lezinto zokuqinisa).
Umgubo ungongezwa kumxube kunye nomdibaniso; Ulwelo lunokudityaniswa nokudibanisa amanzi, ngokufanelekileyo lwandise ixesha lokuxuba. Amanzi ashushu kufuneka asetyenziswe kwindawo yokwakha apho iimeko zivuma.
Umdibaniso awusayi kuxutywa nomkhenkce, iqhwa, iqela elinomkhenkce, njalo njalo, kwaye umndilili unokufudunyezwa ngaphambili ukuba iimeko ziyavuma.
Ebusika ikhonkrithi yokwakha ukongeza kwiarhente yokuthintela ukuqanda ngaxeshanye kusafuneka ngokungqongqo yenze "imigaqo yobugcisa yokwakha ebusika", ukugalelwa ikhonkrithi kufuneka kugutyungelwe ngefilimu yeplastikhi, yomeleze ubushushu kunye nolondolozo
Elona dosi lilungileyo kufuneka limiselwe ngokweemeko zeqondo lobushushu kunye neemfuno zobunjineli ngaphambi kokusebenzisa le mveliso
Powder ngeplastiki ephothiweyo ukupakisha ibhegi, 50㎏/ ingxowa; Ulwelo ngegubu, 250㎏/ Igubu okanye uthutho olukhulu lwetanki
Ubungqina obumanzi, ubungqina obuphezulu bobushushu, ubungqina bomonakalo; Ixesha lokuqinisekiswa ngumnyaka o-1, emva kokuphelelwa yisikhathi, kufuneka kuqinisekiswe luvavanyo ukuba lusetyenziswe kwakhona
Le mveliso ayinakutshiswa kwaye iyadubula, yigcine ngokufanelekileyo.
Okulandelayo: I-GQ-KG (L) / 01/02 iArhente yokuBamba iintambo